‘अब ब्यूरोक्रेसी सजग भए हुन्छ’
अन्तर्वार्ता/विचारबुधबार, १२ पौष , २०७४
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा हालै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा (एमाले) को वर्तमान आर्थिक नीतिका ‘डिजाइनर’ मध्येका एक हुन् । वाम गठबन्धनको घोषणापत्र निर्मातामध्येका एक खतिवडाले सत्तारोहणको तयारी गरिरहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अर्थनीति र कार्यक्रमको रुपरेखा पनि कोरिरहेका छन् । समाजवादी अर्थनीतिका जबर्जस्त पक्षपाती खतिवडासँग नयाँ सरकारको आर्थिक मार्गचित्र बारे रमेश कुमारले गरेको कुराकानीको सार:
वाम गठबन्धनको निर्वाचन घोषणापत्र बनाउन सक्रिय तपाइँ सम्भावित वाम सरकारको आर्थिक नीतिको खाका पनि कोरिरहनुभएको छ । नयाँ सरकारको अर्थनीति के हुनेछ ?
निर्वाचन घोषणापत्र र अरु बेला जनतासामु देखाएको सपना कार्यान्वयनकै लागि आर्थिक विकासको खाका कोरिरहेका छौं । घोषणापत्रहरू हावादारी भए, कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने आलोचनाको जवाफ दिन पनि यसो गरिनु आवश्यक छ । त्यस्तै, सरकार गठनलगत्तै ढाँचा र स्रोत नै नभएका कार्यक्रम घोषणा गर्ने र त्यसैमा अल्मलिने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि अहिले नै योजना बनाइन थालिएको हो ।
विगत वर्षहरूमा सामाजिक क्षेत्रमा राम्रै प्रगति भए पनि मुलुकले पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित गति लिन सकेन । अबको जोड यातायात, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, पर्यटनसहितका पूर्वाधार निर्माणमा हुनुपर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना, उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग मात्रै गर्दैन, उत्पादन र कारोबारको लागत घटाएर व्यापार प्रतिस्पर्धी पनि बनाउँछ । बाह्य व्यापार सन्तुलनको अवस्थातर्फ लैजान्छ ।
निर्मम, अनुदार र अन्यायी बजारको स्वभाव बुझेर त्यसलाई न्यायसंगत र जिम्मेवार तुल्याउन पनि राज्यको भूमिका हुनुपर्छ । बजारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने त हो, तर काम गर्दैन वा गर्न सक्दैन भने विकल्प हेर्नुपर्छ ।
नेपाली श्रम बजारमा वर्षेनि थपिने पाँच लाख र विदेशी श्रम बजारमा रहेका ४० लाखमध्येका पाँच लाखलाई स्वदेश भित्र्याएर प्रतिवर्ष १० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यो कृषिबाट हुँदैन, किनभने आधुनिकीकरण तथा यान्त्रीकरणमार्फत अहिलेकै जनशक्तिलाई कृषिबाट निकाल्नु छ । करीब दुईतिहाइ मान्छे संलग्न भएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ उत्पादन गर्ने कृषिकर्मको अवस्थाबाट एकतिहाइ मान्छे लागेर एकतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र बनाउनु छ ।
तत्काल ठूला उद्योग चलाएर धेरैलाई रोजगारी दिन सकिंदैन । विकल्प पूर्वाधार निर्माण हो, जसले अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष सबैलाई रोजगारी दिन्छ । विदेशमा सिकेको सीप, दक्ष जनशक्ति र शिक्षित बेरोजगारलाई पर्यटन क्षेत्र पनि अवसर हुनसक्छ । त्यसैले ४०–५० लाख पर्यटक भिœयाउने कल्पना गरिएको हो ।
५० लाख पर्यटक पुर्‍याउने, दुई हजार किमी रेल, ७० हजार किमी सडकलाई दोब्बर तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन जस्ता पूर्वाधारको लागत, कार्यान्वयन रणनीति, अनुगमन प्रणाली र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनतालाई कसरी दिने भन्नेमा रुपरेखा तयार गर्दैछौं । किनभने, एक माघले जाडो जाँदैन, पाँच वर्षपछि जनताले जवाफदेहिता खोज्छन् ।
वाम सरकारका नीति र प्राथमिकता विगत २५ वर्षमा अभ्यास गरिएभन्दा के कति फरक हुन्छ ?
नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाबाट उदार अर्थव्यवस्थामा गएपछि केही समय उपलब्धि पनि देखियो । तर, त्यो बाढी थुनेर राखिएको ढोका ह्वात्तै खोल्दा सञ्चित पानी निकास हुञ्जेल देखिने बहावको उपलब्धि जस्तो मात्र थियो । स्रोत नबढेका कारण एकाध वर्षमै त्यो बहाव सुक्यो ।
आयको वितरणमा असमानता, विकासप्रति असन्तुष्टि तथा जनतामा आक्रोश बढेर द्वन्द्व निम्तिनु उदार अर्थव्यवस्थाको असफलता हो । यसले सामाजिक न्याय नदिने रहेछ भन्ने पनि सिकियो ।
अबको बाटो भनेको राज्यको भूमिकामा अलि जोड, निजी क्षेत्रको भूमिका अलि व्यवस्थित र सहकारी क्षेत्रलाई अलि प्रोत्साहित गर्ने भन्ने हो ।
नयाँ संविधानले गरीबी निवारणको जिम्मा राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको परिपूरक भूमिकामा छोडेको छ । राज्यले कानून मात्र बनाइदिए निजी क्षेत्रले सबै काम गर्छ भनिए पनि त्यसो भएन । जलविद्युत् बाहेकका पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन भन्ने देखिइसकेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन पनि पूर्वाधार विकासमा राज्यको भूमिका चाहिने देखिएको छ ।
निर्मम, अनुदार र अन्यायी बजारको स्वभाव बुझेर त्यसलाई न्यायसंगत र जिम्मेवार तुल्याउन पनि राज्यको भूमिका हुनुपर्छ । बजारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने त हो, तर काम गर्दैन वा गर्न सक्दैन भने विकल्प हेर्नुपर्छ । त्यो विकल्प सहकारी पनि हो । राज्यले नसकेको र निजी क्षेत्रले गर्न नचाहेको क्षेत्रमा सहकारी जानुपर्छ । धेरै उत्पादनका साधनहरू सहकारीको माध्यमबाट सामूहिकीकरण गर्दा सामाजिक न्यायसहितको व्यवसाय हुन्छ । जसबाट आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र पुनर्वितरणको काम एकसाथ अघि बढ्छ । अबको बाटो भनेको राज्यको भूमिकामा अलि जोड, निजी क्षेत्रको भूमिका अलि व्यवस्थित र सहकारी क्षेत्रलाई अलि प्रोत्साहित गर्ने भन्ने हो ।
विकास र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र, सरकार र सहकारीको भूमिकामा पुनः परिभाषा गरिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
राज्यको भूमिका लोककल्याणकारी हुनुपर्छ । विकास र आर्थिक वृद्धिलाई समावेशी बनाउने, उत्पादनको साधन, उत्पादन र निर्णय प्रक्रियामा सबैको पहुँच तथा लाभ वितरणमा समान सामाजिक न्याय दिने कुरा लोककल्याणकारी राज्यमा हुन्छ । जनतालाई उत्पादनमा संलग्न गराएर लाभ दिन सक्दैनौं भने सामाजिक सुरक्षामार्फत न्याय दिनुपर्छ । समाजवादउन्मुख अर्थप्रणाली र लोककल्याणकारी राज्यमा सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय पूर्वशर्त हुन्छ ।
उदारवाद भनेको अराजकता होइन, नियमनको अन्त्य पनि होइन ।
निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका कुरा घोषणापत्रमा प्रशस्त छन् । निजी क्षेत्रलाई समाज र वातावरणप्रति न्याय गर्दै नाफा कमाउन, प्रतिस्पर्धी र कुशल ढंगले काम गर्न कतै अवरोध हुने छैन । सहजीकरणका लागि कानून निर्माण गरिदिने मात्र होइन, पूर्वाधार विकास समेत सरकारले गरिदिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र कुशल ढंगले मुनाफा कमाउन, निजी सम्पत्तिको परिचालन, बन्दव्यापार, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने अवसर छ । तर, उदारवाद भनेको अराजकता होइन, नियमनको अन्त्य पनि होइन । बरु, सबैलाई समान किसिमले काम गर्न सक्ने अवसर हो । हामीले चाहेको अराजक बजार अर्थतन्त्र र राज्य संरक्षित पूँजीवाद होइन । त्यसैले पनि राज्य संरक्षित पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म्) बाट लाभ लिएकाहरू अब हड्बडाउनेछन्, जुन स्वाभाविक पनि हो ।
बजारको सिद्धान्त पालना गर्ने, सरकारको नीतिनियम पालना गरेर आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने, कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुनाफाबाट पूँजी निर्माण गर्नेलाई अब पनि कुनै बन्देज हुँदैन । हामीले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण भनेका छौं, जसबाट निजी क्षेत्र खुशी हुनुपर्छ । राष्ट्रिय पूँजी निर्माण भनेको राष्ट्रिय बचत, राष्ट्रिय उद्यमलाई संरक्षण गर्ने पनि हो ।
निरंकुश ढंगले विदेशी पूँजीले मात्र विकास हुँदैन । स्वाधीन अर्थतन्त्र चाहिन्छ । आन्तरिक निजी क्षेत्रलाई पहिलेभन्दा बढी व्यवस्थित र पारदर्शी कारोबारको अवसर सिर्जना हुन्छ, सबै ढुक्क भए हुन्छ । २०५१ सालदेखि नै एमालेको सरकार देखेकाले पार्टीको आर्थिक नीतिमा शंका गर्नुपर्दैन । एमाले र माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र संयुक्त भएकाले आर्थिक रुपमा वैचारिक भिन्नता छैन ।
सरकारमा जो पुगे पनि २०४८ सालपछिको उदार आर्थिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको देखियो । के अब अर्थतन्त्रमा नूतन सोच वा दोस्रो चरणको सुधार चाहिने बेला आएको हो ?
पहिलो र दोस्रो चरणको सुधार भन्ने नै काम नलाग्ने कुरा हो । पहिलो चरणको सुधारले काम गरेन, विकासशील देशहरूमा गरीबी बढ्यो, केहीलाई धनी र धेरैलाई गरीब बनायो, न्यायिक भएन भनेर सर्वत्र स्वीकार गरिसकिएको छ । सुधार भनेको भन्सार दर, व्याजदर र करका दर कम गर्ने, ‘लाइसेन्स राज’ हटाउने मात्र होइन, शासकीय सुधार वा संरचनागत सुधार पनि हो ।
सीमित समूहलाई लाभ भएको छ तर यसको वितरण समानुपातिक र समन्यायिक हुनसकेन ।
अहिले दोस्रो चरणको सुधार भन्ने मान्छे नेपालमा मात्र छन्, अन्यत्र कतै छैनन् । म चाहिं अर्को चरणको सुधार भन्छु । मुलुक संवैधानिक संक्रमणबाट पार भए पनि संस्थागत र कानूनी संक्रमण कायम छ । त्यसैले चरणको नाम नदिइकन सुधारलाई संस्थागत गर्ने र सरकारी नीतिलाई जनमैत्री बनाएर सेवासुविधा दिने एवं सामाजिक न्याय बढाउनुपर्छ ।
हाम्रा अहिलेसम्मका नीतिगत सुधारहरूको लाभ कसले पाइरहेको छ भन्ने कुरा के समीक्षायोग्य विषय हो ?
सीमित समूहलाई लाभ भएको छ तर यसको वितरण समानुपातिक र समन्यायिक हुनसकेन । लाइसेन्सराज हटाएर खुलेका उद्योग व्यवसायबाट कसले लाभ लियो भन्ने जगजाहेर छ । नेपाल भारतबीचको भन्सार दर र विनिमयदरका व्यवस्थामा खेलेर, आयातीत सामग्रीमा न्यून मूल्य अभिवृद्धि गरेर वा कोटा प्रणालीबाट नाफा कमाउने उद्योगहरूले लाभ लिए, गए ।
संस्थागत कमजोरी कहाँ छ भनी जसलाई थाहा छ, उनैले फाइदा लिएका छन् । आम मानिसको रोजगारी, क्रयशक्तिमा यसले अनुकूल प्रभाव पारेको छैन । कारण, उदारवादको बाटोमा नियमनकारी भूमिकामा राज्यले आँखा चिम्लियो । अब नियमन र उदारीकरण सँगसँगै जानुपर्छ । लाभको वितरण सबैलाई पुग्नुपर्छ भनेरै समावेशी शब्द आएको हो । उत्पादनको साधनमा पहुँच नभएका, सूचना नभएका वा शिक्षामा पछि छन् तिनीहरूलाई पनि लाभ पुर्‍याउनुपर्छ ।
अर्थव्यवस्थाका समस्या दिनानुदिन झाङ्गिनुमा देशको नीतिनिर्माण र व्यवस्थापकीय नेतृत्वको अक्षमता पुष्टि गर्दैन र ?
पक्कै गर्छ । तर, यो पनि बिर्सनुहुँदैन कि, हामी करीब–करीब असफल राष्ट्र भनिएको अवस्थाबाट, दशक लामो द्वन्द्व, राजनीतिक संक्रमणकालबाट पार भएर आएका हौं । युद्धले उत्पादन क्षमता ह्रास, संरचना ध्वस्त तथा युवा पलायन हुँदा लामो समयसम्म असर र्पायो ।
सरकारी बजेट खर्च नहुने, पूर्वाधार क्षेत्रको कमजोरीले अप्ठ्यारो स्थिति इंगित गर्छ । नीतिनिर्माण तहमा पर्याप्त कमजोरी छन् । पुनर्निर्माण, फास्ट ट्र्याक, विद्युत् आयोजना निर्माणमा कार्यान्वयनको सुस्तता, निजी क्षेत्रसँग पारदर्शी ढंगले काम नगर्दा ढिलासुस्ती जस्ता प्रशासनिक समस्या पनि छन् ।
पूर्वाधार र आधारभूत सेवा प्रवाहमा पनि जटिलता छन् । सरकार बदलिरहने र कर्मचारीतन्त्रको कमजोरीले पनि त्यसो भएको हो । हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउन सकेनौं, बढी नै राजनीतीकरण र्गयौं कि भन्नेमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।
परीक्षण गरिसकिएका पुरानै राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व बीचमा बसेर वाम सरकारले कसरी यी समस्या समाधान गर्न सक्ला त ?
मान्छे त परीक्षण भएकै हुन्, परिस्थिति भने परीक्षित होइन । सम्भवतः २०५६ सालको चुनावपछि प्रष्ट बहुमतको सरकार बन्दैछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थायी र फलदायी बनाउने हो भने हिजोको जस्तो गल्ती गर्ने सुविधा छैन । अर्को्तिर, पहिलेभन्दा सबैको क्षमता बढेको छ । हिजो जस्तो मन्त्री बनेर हेर्दैछु, सिक्दैछु भन्ने अवस्था छैन, गल्तीको बोध भइसकेको छ ।
सूचनाप्रविधिको प्रयोगले हिजोका गल्ती सुधार्न र अनियमितता रोक्न सकिने भएको छ । सञ्चारमाध्यमको फैलावटका कारण पारदर्शी हुने दबाब छ । सरकारको जवाफदेहिता बढेको छ । विकास र समृद्धिबाहेक अर्को कुनै अजेण्डा छैन भन्नेमा सबै सहमत छन् । काम गर्ने नयाँ अवसर, नयाँ प्रतिबद्धता छ । नेतृत्वमा देखिएको विकासप्रतिको अठोट पनि सकारात्मक छ ।
सामाजिक सुरक्षामा ‘वितरणमुखी’ बनेका वाम दलहरूकै कारण अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने एकथरीको आरोप पनि छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
विकासको प्रतिफल सबैले पाउने समाजवादउन्मुख राज्यप्रणालीमा सामाजिक सुरक्षा आधारभूत उपकरण हो । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अघि बढाउने हामी नै हौं, त्यसैले जस–अपजस लिन्छौं । यतिसम्म धान्न सकिन्छ भन्ने सम्झी, बुझी नै अघि बढाएका हौं ।
हामी सामाजिक सुरक्षालाई बजेटको १५ प्रतिशतभन्दामाथि र्पुयाउँदैनौं । पहिलो कुरा, पेन्सनलाई योगदानमा आधारित बनाउनुपर्छ । दोस्रो चाहिं, निजी क्षेत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्दै जाँदा सरकारको दायित्व घट्छ । तेस्रो कुरा, सहकारी क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा र बीमामा सहभागी गराउन सकियो भने ६०–६५ लाख मानिस लाभान्वित हुन्छन् ।
अहिलेको चुनौती नेताहरूलाई मात्र होइन, कर्मचारीलाई पनि हो । हिजोको जस्तो मन्त्रिमण्डल फेरिइहाल्छ, मन्त्रीका कुरा किन सुन्नु भन्ने नसोच्दा हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र सजग हुनुपर्छ ।
अहिले एकातिर आधारभूत स्वास्थ्य पनि निःशुल्क, अर्का्तिर स्वास्थ्य बीमा, दोहोरो खर्चलाई मिलाउनुपर्छ । बीमा शुल्क तिर्न नसक्नेलाई मात्र सरकारले तिरिदिने हो, सबैका लागि निःशुल्क बनाउने होइन । शिक्षामा पनि तिर्न सक्नेलाई तिराउने हो । सामाजिक सुरक्षाको नयाँ निकाय खोल्नुपर्छ भन्ने पनि लागेको छ ।
गरीबी परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमै व्यक्ति कुन–कुन सामाजिक सुरक्षा पाउन योग्य भन्ने समेटियो भने अहिलेकै सामाजिक सुरक्षाको बजेटबाट पनि लाभ र्पुयाउन सकिन्छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण, सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा दरिलो उपाय भनेको रोजगारी हो । रोजगार प्रत्याभूति ऐन ल्याएर गरीबलाई रोजगारी दिनुपर्छ, बेरोजगारलाई भत्ता होइन ।
वामपन्थी दलहरूले समाजवादी अर्थ–सामाजिक व्यवस्थाको वकालत गर्छन् । तर, त्यसको व्याख्यारअपव्याख्याले निजी क्षेत्रमा त्रास पनि देखिएको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
समाजवाद भने पनि उत्पादनका साधन जस्तै भूमि, पूँजी, प्रविधिको राष्ट्रियकरण गरिंदैन । संविधानबमोजिम निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति आर्जन, उपभोग वा परिचालन गर्न रोकिंदैन । सरकारले उद्योग चलाउँदै हिंड्दैन तर औषधिजस्ता कुनै रणनीतिक क्षेत्रको उद्योग चलाए निजी क्षेत्रले विरोध नगर्दा हुन्छ । जहाँ निजी क्षेत्र आउन सक्दैन, चाहँदैन वा प्रतिस्पर्धी रुपमा काम गर्दैन, त्यहाँ सरकार आउन सक्छ ।
सहकारीले सामूहिकताको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा कच्चापदार्थ उत्पादन, अर्धप्रशोधन तथा बजारीकरण गरिदिएर निजी क्षेत्रलाई परिपूरकको काम गर्छन् । सिन्धुलीमा जुनार उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र गयो र ? गोलभेंडाको केचप निजी क्षेत्रले उत्पादन र्गयो, गोलभेंडा त सहकारीले तयार पारे । यसको अर्थ, एउटालाई अस्वाभाविक संरक्षण, प्रोत्साहन र अर्कोलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रिनै कठिन बनाउने विभेदकारी नीति बनाउने होइन ।
अबको नीति लाइसेन्सराज, नियन्त्रित व्यवस्थामा जाने होइन, बरु सरकारले पूर्वाधार बनाइदिएर पूँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने हो । आन्तरिक र बाह्य निजी क्षेत्रलाई पूँजी र प्रविधि भिœयाएर लगानी गर्न, कर तिरेर नाफा गर्न र मुनाफा लैजान खुल्ला हृदयले स्वागत र आह्वान गर्छौं ।
अर्थनीतिका यी सम्पूर्ण समस्या, बेथिति र चुनौती थेग्न नयाँ सरकारलाई कस्तो अर्थमन्त्री चाहिन्छ ?
नेतृत्वकर्तामा विकासप्रति प्रष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ । सिक्दै मन्त्रालय चलाउने छूट छैन । परिणाममुखी हुनुपर्छ । मन्त्रीहरूले कार्यालयसमय अघिपछि समेत परियोजनाको निर्णय, अनुगमन गर्नुपर्छ । भाषण गर्दै हिंड्ने, रिबन काट्ने समय छैन ।
प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कानूनसम्मत निर्णय तथा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताका लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति आदिमा भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
यो पाँच वर्षको स्थिर सरकार छ, यो बीचमा कसैले कार्यसम्पादन गरेन भने उसको वृत्ति–विकासको अवसर पनि गुम्छ भनेर सोच्नुपर्छ । अहिलेको चुनौती नेताहरूलाई मात्र होइन, कर्मचारीलाई पनि हो । हिजोको जस्तो मन्त्रिमण्डल फेरिइहाल्छ, मन्त्रीका कुरा किन सुन्नु भन्ने नसोच्दा हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र सजग हुनुपर्छ ।